By ချစ်ဖေ (တောင်တွင်းမြေ)4April 2018
ဒီနေ့ခေတ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ တည်ဆောက်ခဲ့သမျှ သင်္ဘောတွေထဲမှာ ဘယ်အစီးက အကြီးဆုံးပါလဲ။ လူအများစုကတော့ သင်္ဘောလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ တိုက်တန်းနစ်ကို သိကြတယ်။ ပထမဆုံး ခရီးစဉ်မှာပဲ နစ်မြှပ်သွားခဲ့လို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူက အကြီးဆုံး သင်္ဘောတစီး ဟုတ်ပါရဲ့လား။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သင်္ဘောတွေ အကြောင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
(၁၀) TI Class Supertanker ။ ။ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောတန်းဝင် ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်း လှလို့ လူသိများပါတယ်။ ဆီတင် သင်္ဘောဖြစ်ပြီး ဆီလှောင်ကန်ကြီး ၄ ခု ပါရှိပါတယ်။ Maersk Triple E ဆိုတဲ့ သင်္ဘောက တကယ်တမ်း ဆိုရင် အခု မော်ဒယ်ထက် ပိုရှည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝန်တင်ဆောင်နိုင်မှာတော့ အခု မော်ဒယ်က ပိုကြီးတယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ တန်ချိန် ၄ ဒသမ ၄ သိန်းလောက် ဝန်တင်နိုင်ပါတယ်။ ရေမိုင် ၁၆ ကနေ ၁၈ မိုင် အတွင်း မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ မီတာ ၃၈၀ (၁၂၄၇ ပေ) ရှည်ပါတယ်။
(၉) Berge Emperor ။ ။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်က ဂျပန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Mitsui က တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဆီတင် သင်္ဘောပါ။ ၁၉၇၅ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃၀ မှာ ရေချပါတယ်။ အရှည် ၃၈၁ ဒသမ ၈၂ မီတာ (၁၂၅၂ ဒသမ ၇ ပေ) ရှည်ပါတယ်။ အလေးချိန် တန်ချိန် ၂ ဒသမ ၁၁ သိန်းလောက် သယ်နိုင်ပါတယ်။ မူလက Bergesen d.y. & Co. ကနေ ပိုင်ဆိုင်တာ ဖြစ်ပေမယ့် နောက်တော့ Maastov BV. ကို ရောင်းချလိုက်ပြီး သင်္ဘောအမည်မှာလည်း Emperor ကို ထပ်ဖြည့်ခေါ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
(၈) CMA CGM Alexander von Humboldt ။ ။ ကုန်တင်သင်္ဘော တန်းဝင် မော်ဒယ်ပါ။ နောက်ပိုင်း Maersk Triple E Class ထွက်မလာခင် အထိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး ကွန်တိန်နာတင် သင်္ဘော ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၃၉၆ မီတာ (၁၂၉၉ ပေ) ရှည်ပါတယ်။ အလေးချိန် တန် ၁ ဒသမ ၈၇ သိန်းထိ တင်ဆောင်နိုင်တဲ့ သင်္ဘော ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) Emma Maersk ။ ။ လက်ရှိ အချိန်ထိ အသုံးပြုနေဆဲ သင်္ဘောတွေထဲမှာ ဒုတိယ အကြီးဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် အတွင်း ရေချခဲ့ချိန်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မော်ဒယ် အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ နောက်ဆက်တွဲ မော်ဒယ် ထွက်လာပြီး ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး သင်္ဘောတွေ အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်နေဆဲပါ။ ၃၉၇ ဒသမ ၇၁ မီတာ (၁၃၀၅ ပေ) ရှည်ပြီး ကွန်တိန်နာတင် သင်္ဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၆) Maersk Mc-Kidney Moller ။ ။ Triple E မော်ဒယ်ရဲ့ ရှေးပြေးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းတွင်းခန်း အကျယ်ဆုံး သင်္ဘောအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်နေပါတယ်။ Maersk ကနေ Daewoo ကုမ္ပဏီ အတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်းက စတင် အသုံးပြုနေခဲ့တာပါ။ ၃၉၉ မီတာ (၁၃၀၉ ပေ) ရှည်ပါတယ်။ ရေမိုင် ၂၃ မိုင်နှုန်းထိ အမြန်ဆုံး မောင်းနှင်နိုင်သလို ကွန်တိန်နာ ၁၈၂၇၀ လုံး တင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
(၅) Esso Atlantic ။ ။ ၄၀၆ ဒသမ ၅၇ မီတာ (၁၃၃၃ ဒသမ ၉ ပေ) ထိ ရှည်ပါတယ်။ အလေးချိန် တန် ၅ ဒသမ ၁၆ သိန်း ထိ ဝန်တင်နိုင်ပါတယ်။ ၃၅ နှစ်တာ ပတ်လုံး အသုံးပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်ပါ။ တည်ဆောက်ခဲ့သမျှ အကောင်းဆုံး သင်္ဘောလို့ တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူက စက်သုံးဆီတင် သင်္ဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် အတွင်း ပါကစ္စတန်မှာ အနားပေးခဲ့ပါတယ်။
(၄) Batillus ။ ။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်က ပြင်သစ် အခြေစိုက် ရေနံကုမ္ပဏီ Shell Oil အတွက် သင်္ဘော ကုမ္ပဏီ Chantires de I’Atlantique ကနေ ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ စက်သုံးဆီတင် သင်္ဘောပါပဲ။ သူ့နောက်မှာ အခြေခံ ဒီဇိုင်းဆင်တဲ့ Bellamya, Pierre Guillaumat နဲ့ Prairial လို သင်္ဘော ၃ စီး ဆက်ထွက်လာပါသေးတယ်။
စုစုပေါင်း ဒီ ၄ စီးထဲမှာ Batillus ကပဲ အချိန် အကြာဆုံး သုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အလေးချိန်တန် ၅ ဒသမ ၅၄ သိန်းလောက် ဝန်တင်နိုင်ပါတယ်။ ၄၁၄ ဒသမ ၂၂ မီတာ (၁၃၅၉ ပေ) ရှည်ပါတယ်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်ထိ သုံးခဲ့ပါတယ်။
(၃) Pierre Guillaumat ။ ။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အထက်က Batillus ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ မော်ဒယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းစွာနဲ့ ၆ နှစ်ပဲ သုံးလိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ်ထည်ကြီးလို့ ပနားမားနဲ့ စူးအက် တူးမြောင်းတွေကိုတော့ ဝင်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။ တနာရီ ရေမိုင် ၁၆ မိုင်နှုန်း မောင်းနှင်နိုင်တယ်။ အလေးချိန် တန် ၅ ဒသမ ၅၅ သိန်း တင်နိုင်ပါတယ်။ အလျား ၄၁၄ ဒသမ ၂၂ မီတာ (၁၃၆၀ ပေ) ရှည်ပါတယ်။
(၂) Seawise Giant ။ ။ ULCC ကနေ ထုတ်လုပ်တဲ့ မော်ဒယ်ပါ။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ Sumitomo Heavy Industries Ltd,. ကနေ ဂျပန်မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ အီရန်-အီရတ် စစ်ပွဲ အတွင်း လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု တခုမှာ ဝင်မိလို့ နစ်မြှပ် သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ပြန်ဆယ်၊ ပြန်ပြင်ခဲ့တယ်၊ ပြန်သုံးလို့ ရခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ နောက်ဆုံး ခရီးစဉ် ပြေးဆွဲခဲ့ပြီး အနားပေးခဲ့ပါတယ်။ သင်္ဘောကိုလည်း မူလ အမည် Seawise Giant ကနေ Mont လို့ အမည်ပြောင်း ခဲ့ပါတယ်။
(၁) Prelude FLNG ။ ။ လက်ရှိ အချိန်ထိအောင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ သင်္ဘောပါ။ အင်ပါယာ စတိတ် အဆောက်အဦ အမြင့်ထက်တောင် ရှည်ပါသေးတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာအတွင်းက တောင်ကိုရီးယားမှာ ရေချခဲ့ပါတယ်။ ၄၈၈ မီတာ (၁၆၀၁ ပေ) ရှည်ပါတယ်။ မျက်နှာစာ ၇၄ မီတာ (၂၄၃ ပေ) ကျယ်ပါတယ်။ တည်ဆောက်ရေး မှာ သံမဏိ တန်ချိန် ၂ ဒသမ ၆ သိန်းကျော် သုံးခဲ့ပါတယ်။ အများဆုံး တင်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဝန်နဲ့ အတူ ဆိုရင် အလေးချိန် တန် ၆ သိန်းလောက်ထိ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ လေယာဉ်တင် သင်္ဘောတွေရဲ့ အလေးချိန်ထက် ၅ ဆလောက် ပိုတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Topics: အကြီးဆုံး သင်္ဘောများ